भक्तपुर नगरपालिकाकाे दश महिनाकाे अाम्दानी ९१ कराेड १५ लाख
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को १० महिनाको अवधिमा रु. ९१ करोड १५ लाख १९ हजार आम्दानी गरेको छ । यस अवधिमा नगरपालिकाले रु. ७८ करोड १२ लाख दुई हजार खर्च गरेको नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले जानकारी दिए ।
गत २०७४ साल असार अन्तिममा प्रथम नगरसभाले चालू आवका लागि कूल रु. एक अर्ब ५ करोड ५५ लाख बजेट पारित गरेको थियो । नगरपालिकाले ‘देकोमिवा इटापाके आवास योजना’को लागि पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग रु. १० करोड ऋण लिएर त्यसलाई पनि आम्दामीमै राखेको छ ।
नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ख्वप कलेज, ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ, ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान, शारदा कलेज र जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि रु. ४१ करोड खर्च गर्ने भएको छ ।
ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानका लागि चालू आवमा रु. ६ करोड ४८ लाख ७८ हजार खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकामा गत चैत मसान्तसम्म रु. तीन करोड ९३ लाख खर्च गरेको नगर प्रमुख प्रजापतिले बताए । नगरपालिकाले चालू आवभित्र सरसफाइका लागि रु छ करोड ५० लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विकास निर्माणतर्फ रु. ३१ करोडको बजेट विनियोजन गरेकामा प्रत्येक वडा कार्यालयलाई रु. ५० लाखका दरले बजेट वितरण गरेको नगर प्रमुख प्रजापतिले बताए । विकासका साना काम वडा कार्यालय आफैँलाई गर्न बजेटसहितको अधिकार दिइएको छ ।
गत आवमा आन्तरिक आयतर्फ रु. २१ करोड ५० लाख ५४ हजार संकलन गरेको नगरपालिकाले चालू आवमा २६ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु. २७ करोड ९ लाख १५ हजार आम्दानी गरेको छ ।